Ụgbọelu Mbụ Ga-Awụcha n'Ọdụ Ụgbọelu Anambra n'Epure 30 —Obiano - Igbo News | News in Igbo Language
Igbo sị na ọ na-abụ a rụchaa ụlọ e mepeghị ya emepe, ọ dị ka ọ bụ ahụhụ na arịrị ka a rụụrụ.
N'ihi nke ahụ, gọọmentị steeti Anambra ekwupụtala na steeti ahụ adịla njikere ịnabata ụgbọelu mbụ n'ọdụ ụgbọelu steeti ahụ a rụrụ ọhụrụ.
Nke a bụ nke e kwupụtara site n'ọnụ Gọvanọ Willie Obianọ, bụ aka na-achị steeti ahụ, n'okwu ya oge ọ gara njem nleta n'ọdụ ụgbọelu ahụ, bụ nke a rụrụ n'Ụmụeri, dị n'okpuru ọchịchị ime obodo 'Anambra East'.
Njem ahụ Gọvanọ Obianọ gara ebe ahụ bụ nke nwunye ya bụ Ebelechukwu Obiano, ndị eze ọdịnala obodo, na ụfọdụ ndị dị iche iche e ji okwu ha agba ìzù na steeti ahụ sòrò ya wee gaa n'isi ngwụcha izuụka gara aga.
Otu nwaafọ steeti Anambra na-ewu èwù n'ihe gbasara azụmahịa ma bụrụkwa onye obodo Ọkịja, bụ Dọkịta Earnest Obiejesi bùkwàrà ụgbọelu Helikọpta ya wee wụchaa n'ebe ahụ ụbọchị ahụ.
Dịka ọ na-agba akaebe na ọdụ ụgbọelu ahụ ga-enye aka n'ịkwalite ọnọdụ akụnụba na ọnọdụ mmepe mpaghara steeti Anambra n'izugbe, tinyere ọtụtụ uru ndị ọzọ nke ahụ ga-ewèta; Gọvanọ Obianọ mèkwàzịrị ka a mara na ịrụcha ọdụ ụgbọelu ahụ bụ mmezupute otu n'ime nkwa dị iche iche o kwere Ndị Anambra, ma mekwazie ka a mara na ọchịchị ya ga-emezucha nkwà niile o kwere ụmụafọ steeti ahụ tupu ọchịchị ya arịtuo n'ọkwa na steeti ahụ.